Commercial Heat saar
bamka Heat A meeleysan yahay sida ugu dhow ee suurto gal ah in nidaamka sifeynta hoolka dabbaasha. Waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo soo baxay albaabada iyo uma baahna inay ded ah wax ka gees ah waxyaabaha. Dhab ahaantii haddii Heat saar la daboolay inta lagu jiro hawlgalka waxaa fiican loogama oofin doonaa.
Ma jirto fiiro loo baahan yahay by Heat bamka sida la qaboojiye. Si fudud u saarto wixii caleemo, doog, warqad, iwm, taas oo mararka qaarkood ururiya ka hawada. chemistry pool waa in had iyo jeer sii dheeli tiran. Soo gagoado evaporator waxaa dahaarka leh si looga hortago in ragaasi. Si kastaba ha ahaatee haddii aad ku nooshahay meel u dhow deegaanka cusbo-biyo ah oo laga yaabaa in aad rabto in aad hoos u tuubada gariiradda evaporator ka baxsan si looga hortago kor u dhista oo cusbo iyo miridhku ku.
Haa. Si kastaba ha ahaatee waxa ay ku xiran size balliga iyo xilliga sanadka. bambooyin Heat ka samaysan yihiin si ay u ilaaliyaan heerkulka pool on joogta ah maalin walba. Haddii bamka kulaylka waxaa si fiican u kala xajmi in size balliga, mar heerkulka la doonayo la gaaro waxa ay si toos ah u ilaaliyaan heerkulka in bisha oo dhan.
Korontada lagu iibiyo by a unit yeedhay kilo-waat saacaddii. Mid ka mid ah-waat saacaddii waa loo siman yahay si ay u 3412 BTU. BTU u taagan tahay Unit kulul British. Waa unug oo ah qiyaas in qaar ka mid ah soo saarayaasha bamka kulaylka isticmaali on caddaymaha ay.
COP u taagan tahay Wehliyaha of ie waxqabadka. Ratio of saarka amar ay aqbasho awoodda. Tani waxay ku xidhan tahay heerkulka hawada daarmayaay'e iyo heerkulka biyaha ee hoolka dabbaasha. Waxay kuu sheegaysaa tamarta rating hufnaanta bamka kulaylka ah.
Sida dhammaan nidaamyada dabaasha kululaynta aad waxaa lagula talinayaa in ay isticmaalaan cover barkad lagu dabaasho marka ma aha in la isticmaalo. Tani hayn doonaa uumi (khasaaraha ugu weyn kulaylka) inay ugu yaraan iyo si loo yareeyo kharashka pool kuleylka guud iyo Jahwareer aan la rabin. cover pool A gooyn karo wadarta khasaaraha kulaylka by 50% ilaa 95%.
bambooyin kulaylka Aquark waa ay qaataan qaybaha tayo sare, xitaa iyada oo aan leefid ah dayactirka, bamka pool kulaylka a si fudud u socdaa 10 ilaa 20 sano. Laakiin, iyadoo dayactir wanaagsan, our bamka kulaylka pool macno ahaan socon karaa Meyeydaan.
Tiirarka ugu muhiimsan ee F Gas Xeerarka cusub ee Midowga Yurub waa in la yareeyo qiiqa iyo inaad u guurto dhinaca xal GWP hoose. Tani waxay hoos u isticmaalka HFCs iyo hoos u dhac 37% sannadka 2020 iyo 79% by 2030. By 2025 nidaamka Single Split A / C ka yar lacag refrigerant 3kg ku lug leedahay waji waa inay ku jiraan refrigerant la GWP ah.
R32 ayaa cadaadis shaqo la mid ah R410A agagaarka 12-26 Bar (174-377 PSI), si kastaba ha ahaatee R32 ayaa awood u fiican in ay is dhaafsadaan kulaylka-load badan R410A iyo koriyo awood ka badan R410A samaynta nidaamyo ku ool ah.
R32 ayaa GWP ka hoosaysiisay R410 iyo isticmaalaa lacag refrigerant 30% in ka yar in ay soo saaraan ah awoodda load siman. Sidaas darteed guud ahaan hawada CO2 ah waxaa lagu yarayn karaa qiyaas ahaan 77%.
Guud hoose GWP heerka sare ee ololi, R32 waa ka duwan yahay no. R32 la siiyay A2L Qoondaynta iyo waxa lagu tilmaamay A2 category ololi kara. Qoondaynta in amarka 67/548 / EEC & 1999/45 / EC: F +; R12 Aad ololi kara. Sidaas oo keliya la kulmay iyo dadka si fiican u baray waa in ay la tacaalaan gaasas cadaadis.
Aquark waa shirkad khibrad leh oo ku takhasustay cilmi baarista, horumarka iyo soo saarista barkadaha dabaasha ee matoorka kuleylka. Waxaan nahay abuuraha tikniyoolajiyadda kuleylka ah ee InverPad.
Keyuan Laba Road, Zone Development Gaoli, Ronggui, Degmada Shunde, Foshan, PRChina 528306